Orinasa mpanondrana antsy - Mpanamboatra mpanohana an'i Shina, mpanamboatra mpamatsy
UV / mangatsiaka Prevent
Hetsika fanoherana Hip
Miverina & Lumbar
Miverina & Beta
Tohan'i Thigh & zanak'omby
Fanohanana ny tànana
Mandehana any amin'ny orinasa
Ekipa ekipa teknika
Fanohanana ny lohalika Silicone
Mora maratra ny lohalika noho ny antony maro isan-karazany, ary ny taolana dia mora kokoa miaraka amin'ny fahanterana, koa tokony harovana ny lohalika. Ny mpiaro ny lohalika silicone dia manafana ny tonon-dohalika ary mampitombo ny ra mivezivezy; mameno ny 360 ° ny peratra silicone manodidina ny andaniny roa miaraka amin'ny lohalika manolotra fiarovana feno ho an'ny sendika ny lohalika; Ny mpiaro ny lohalika dia tsy mora mihetsika.
Ny fehikibo patella dia karazana mpiaro fanatanjahantena amin'ny tonon-dohalika. Tsy dia lehibe toy ny fanohanana ny lohalika ny volume, ary mora ampiasaina. Ny fiasa lehibe amin'ny fehikibo patella dia ny miaro ny ligament patellar, manamafy ny patella, mampihena ny fihinana ny meniskus, ary koa manana fiantraikany tsara amin'ny fiarovana. Ny fanaintainana naterak'izany koa dia misy fiantraikany tsara.
Ny sorona fehikibo nylon
Ny fehikibo ny lohalika amin'ny nylon sy ny fehikibo dia manome fofona tsara ary miaraka amin'ny famolavolana andri-bika koa dia azo atao fanohanana tsara kokoa. Na fanatanjahan-tena hentitra, fandehanana, fitsangatsanganana, fihazakazahana, fanatanjahan-tena na amin'ny fanaintainana amin'ny lohalika amin'ny ankapobeny, ny fanaovana ity sorona miaro amin'ny lohalika ity dia hiaro ny lohalikao amin'ny fery na ny fanaintainana fanaintainana mankafy ny fihetsehana na ny fandanjalanjana miaraka.
Ny fanohanan'ny lohalika bongo
Maivana sy manjavozavo, fanatanjahantena marefo marefo, mahazo aina, mety tsara ho an'ny fanatanjahantena mahery vaika toy ny basikety, mandritra izany fotoana izany dia misy ihany koa ny fanohanana tsara sy ny fanalana kofehy ary ny fikorontanana amin'ny fikorontanana, tsotra ary mora hitafy, apetraka fotsiny, tsy dingana fanampiny, elastika ary ny lamba miaraka amin'ny hafanana tsara, dia manasongadina tsara ny halavan'ny tongotra koa, izay samy mahafinaritra tokoa.
7mm ny tanànan'ny lohalika neoprene
Ny tànan'ny fehin-kibo 7mm izay vokarintsika dia vita amin'ny neoprene sy nylon, ny fitaovana manome fofon'aina sy avo lenta dia afaka manome fahatomombanana tsara ary manome fanohanana ny lohalika. Azontsika atao ny manamboatra loko sy habe ho anao, ary ekena ihany koa ny famantarana namboarina. Ity lobaka amin'ny lohalika ity dia ampiharina amin'ny fiarovana amin'ny fanatanjahan-tena, ary azo alaina amin'ny olon-dehibe sy ny ankizy.
Fanohanana ny lohalika
Tafio ny fanohanan'ny lohalika miendrika boribory io mba hahazoana antoka fa tsy ho maratra mora ny lohalika. Raha ratra aorian'ny ratra dia afaka mampihena ny fiondrika amin'ny lohalika izy io mba hiarovana ny tonon-dohalika. Izy io dia manana fitambatra mifanentana amin'ny kalitao, ny habetsahana ary ny hatevin'ny fitaovana neoprene dia manentana ny hetsika misy fiatraikany ary ny fahatsapana tsy be dia be mamela ny fihetsiky ny hetsika azo ampiharina tanteraka!
Brace aretin-dohalika volom-borona dia vokatra vita amin'ny lamba misy fibre charcoal. Ny fangarony dia misy koa ny landy vita amin'ny landy, ny landy vita amin'ny zipo, spandex, sns. Ny famolavolana miavaka momba ny fibre vaingam-borona dia mahatonga ny fiasan'ny saribao volotsangana 100%. Io no safidy tsara indrindra ho an'ny fidiran'ny hamandoana sy ny hatsiaka hiarovana ny lohalika.